3 Mogya kurow, due.+ Nnaadaa ne dwowtwa ahyɛ no mã. Na afowde mpa hɔ da! 2 Apɔnkɔ mpire+ gyigye wɔ hɔ, na teaseɛnam nan de kirididi ba, apɔnkɔ tu mmirika denneennen, na nteaseɛnam huruhuruw.+ 3 Apɔnkɔsotefo foro ba, nkrante ano pa gya, peaw ano tew yerɛwyerɛw te sɛ anyinam,+ nnipa pii atotɔ, na afunu bebree sum hɔ; awufo dodow nni ano, na wohintiw hwehwe wɔn afunu so. 4 Ne nyinaa fi aguaman hoɔfɛfo no aguamammɔ dodow,+ asumansɛm mu hemmaa a ɔde n’aguamammɔ sum amanaman afiri na ɔde n’asumanne+ to mmusua brada no. 5 Asafo Yehowa aka sɛ: “Hwɛ, me ne wo wɔ asɛm,+ na mɛma w’atade so abegu w’anim na mama amanaman ahu w’adagyaw+ na ahenni ahu w’animguase. 6 Mɛtow atantanne agu wo so,+ na mɛma wo ho ayɛ abofono na mama nnipa ahwɛ wo aka asɛm.+ 7 Na obiara a obehu wo no beguan afi wo ho+ na waka sɛ, ‘Niniwe abɔ! Hena na obegyam no?’ Ɛhe na menya awerɛkyekyefo ama wo? 8 So wuye sen No-Amon+ a ɔte Nil asuasu ho+ no anaa? Ɔno na nsu atwa ne ho ahyia; n’ahode yɛ po, na po yɛ n’afasu. 9 Etiopia ne Egypt+ yɛ n’ahoɔden kɛse, na wonni ano. Put ne Libiafo nso boaa no.+ 10 Ɔno nso, wotuu n’ase kɔe; ɔkɔɔ nkoasom mu.+ Na wɔtetew ne mma mu wɔ mmɔnten ntwea so nyinaa;+ wɔbɔɔ n’anuonyamfo so ntonto,+ na wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn guu n’atitiriw nyinaa.+ 11 “Wo nso wobɛbow nsã+ na woayera.+ Na wobɛhwehwɛ guankɔbea afi wo tamfo hɔ.+ 12 W’abannennen nyinaa te sɛ borɔdɔma aba a adi kan abere, na sɛ wɔwosow a, ɛporow gu odifo anom.+ 13 “Hwɛ, wo dɔm nyinaa yɛ mmea.+ Na ɔkwan biara so wobebue w’asase ano apon ato hɔ ama w’atamfo. Na ogya bɛhyew w’apon akyi adaban.+ 14 Sesaw nsu sie nkahyem da no.+ Hyɛ w’abannennen mu den.+ Tiatia atɛkyɛ mu na wɔw dɔte, na so ade a wɔde twa birikisi mu. 15 Ɛhɔ mpo ogya bɛhyew wo. Na nkrante betwa wo afi hɔ.+ Ebedi wo nam te sɛ ntuntummɛ.+ Ma wo dodow nnɔɔso sɛ ntuntummɛ; ma wo dodow nnɔɔso sɛ mmoadabi. 16 Woakeka w’aguadifo abɔ so ma wɔdɔɔso sen ɔsoro nsoromma.+ “Ntuntummɛ de, wɔworɔw wɔn ho gu hɔ, na wotu kɔ. 17 W’awɛmfo te sɛ mmoadabi, na wo dɔm-ano-boafo te sɛ mmoadabi manyamanya. Wɔtetare ban ho awɔw da, na owia bɔ pɛ na wɔatutu kɔ, na obiara nnim baabi a wɔwɔ bio.+ 18 “O Asiria hene, wo nguanhwɛfo totɔ nko,+ na w’atumfoɔ tete wɔn atenae.+ Wo manfo ahwete wɔ mmepɔw so, na obiara nni hɔ a ɔbɛboaboa wɔn ano.+ 19 Ahotɔ biara nni hɔ mma wo wɔ w’amanehunu mu. Na wo kuru nni sabea.+ Wɔn a wɔte wo ho nsɛm nyinaa bɛbɔ wɔn nsam.+ Adɛn, hena na womfa w’amumɔyɛsɛm nkɔ no so daa?”+